Pa-Oh MP3 » Blog Archive » ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့သီချင်းများ
By Khun Lazer • အုပ်စုလိုက်ခွေများ • 25 Feb 2012	ကျွန်တော်တို့ ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့ရဲ့ အထွတ်အထိပ်ထားရာ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ (ခေါ်) တပေါင်းပွဲတော်ကြီးဟာ ရောက်လုနီးနေပါပြီ။ မကြာမှီ ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့ အများစုနေထိုင်ရာ ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့နယ်တစ်ဝိုက်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် သထုံဒေသ အစရှိတဲ့ ဒေသတို့မှာလည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကျင်းပကြပါတော့မယ်။
ထို့အတူ အမိပအိုဝ်းမြေကို စွန့်ခွာပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တိုင်းတစ်ပါးသို့ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မျိုးချစ်ပအိုဝ်းလူငယ်များ အသီးသီးတို့မှလည်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပခဲ့ကြသလိုပဲ ဆက်လက်ပြီးတော့ လက်ဆင့်ကမ်း ကျင်းပကြအုံးမှာ မလွဲပါခင်ဗျာ။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒီပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပအိုဝ်း-MP3မှလည်း ပအိုဝ်း အမျိုးသားနေ့ဆိုင်ရာ သီချင်းများကို အဓိကထားပြီး ဖြန့်ဝေသွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဥပမာ- ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ အခန်းအနားစဖွင့်တော့မယ် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအလံကို အလေးပြုတော့မယ့်အခါမှာ အမျိုးသားသီချင်းကို လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ ဒီပို့စ်အောက်မှာပဲ မျှဝေသွားပါမယ်။
လိုအပ်တဲ့ Pa-Oh National Day သီချင်းများရှိလျှင်လည်း ခေါင်းစဉ်နဲ့တကွ၊ အဆိုတော် နာမည်နဲ့အတူ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာဖွေမျှဝေသွားပါမယ်။
Titles & Download Links
(၁) အလံတော် အလေးပြုရန်
(၂) ဒဲဉ်သီ;လာဗွေ – ခွန်ခမ်းခြွိုင် (တွမ်;)အစွို,
(၃) ခွို,ပအိုဝ်;ပွယ်ဒဲဉ်သီ; – ခွန်သန်းမောင်+အစွို,
(၄) တွို,ယင်းသွူဒဲဉ်သီ; – ခွန်သန်းမောင်+မူ;
(၅) မွူးနီ,မင်္ဂလာ;ပွယ်,ဒဲဉ်သီ; – ခွန်ဟန်ထွဋ်
(၆) မွူးနီ,မျတ်ထွာ လာဗွေဒဲဉ်သီ; – နန်းပေ;ဗိ
(၇) သမဲင်,တွမ်;နီတာ;၀ွန်; – ခွန်ရန်နိုင်
(၈) မဟာနွယ်;ပအိုဝ်;ခွို, – ခွန်ယောင်းယွာ+အစွို,
(၉) ပအိုဝ်;သွီ; – ခွန်ရဲနိုင်၊ ခွန်ဇော်ဗဲင်း+အစွို,
(၁၀) ဖြေင်းတရောင်;ချင်, – ခွန်ဟန်ထွဋ်
ခွန်တင်မောင် February 26, 2012 at 2:09 pm	သို့
Reply	Admin-Khun February 26, 2012 at 2:49 pm	လက်ရှိတင်ထားတဲ့ သီချင်းခွေတွေမှာ ရှာဖွေပြီးတော့ Download လုပ်ပါလို့ အကြံပေးပါတယ်ဗျာ။ ခွန်ရဲနိုင်နဲ့ခွန်ရဲသွေး သီချင်းခွေ တော်တော်များများ တင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	khunaungnaing ကျောက်တလုံးမြှို့ February 29, 2012 at 11:41 am	သီချင်းတွေအရမ်းကောင်းတယ်
Reply	nang shwe moe March 1, 2012 at 1:48 am	သီချင်းတွေအကုန်ကောင်းပါတယ် ‘ယူ;သေနန်းငါးပွဲဒဲဉ်,သီ;’ အဲသီချင်းကိုလိုချင်လို့ပါ၇ှင်……..
Reply	Admin-Khun March 1, 2012 at 9:41 am	သီချင်းဆိုထားတဲ့သူနဲ့ … အခွေနာမည်ကို ပြောပြလို့ရမလားဗျ ..။ ကျွန်တော်တို့ ရှာပေးကြည့်ပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	khunkhan March 1, 2012 at 2:28 am	ပအိုဝ်း အမျိုးသားပွဲတော်ကို ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
Reply	khunkhan March 1, 2012 at 2:43 am	ကျွန်တော်တို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့အတွက် ပအိုဝ်းအမျိုးသားသီချင်းကို တင်ပေးတဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော အဝေးမှာရှိနေသော ပအိုဝ်းတွေက အမျိုးသားသီချင်းတွေ အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။
Reply	khunaungnaing ကျောက်တလုံးမြှို့ March 2, 2012 at 10:56 am	သီချင်းတွေအရမ်းကောင်းပါတယ်
Reply	Nann Nann March 5, 2012 at 6:00 am	သီချင်းကောင်းများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဝေးနေပေမယ်. သီချင်းလိုချင်တဲ.အခါ အခက်အခဲမရှိအောင် Pa-Oh MP3 ကနေသီချင်းတွေရှာလို.ရတယ်. သီချင်းအစုံတင်ပေးတဲ.အတွက်ကျေးဇူးပါ……..
Reply	Admin-Khun March 7, 2012 at 6:15 am	Comment အတွက် ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်း Reply	khunsanchi March 6, 2012 at 9:28 pm	စေတနာ အပြည့် နဲ့ ပအိုဝ် သိချင်း တွေ့ တင် ပေး တဲ့ကို ကြိး ခွန် လေဆာ ကို ကျေး ဇူး အများ ကြိး တင် ပါ တယ် ..ဆက် ပြိး ဒိ ထက် ကြိူး စား ပါ လို့ တိုက် တွန်း ပါ တယ် ..အား ပေး တယ် ….
Reply	Admin-Khun March 7, 2012 at 6:16 am	Thanks for the comment bro Reply	khunnaungwai March 12, 2012 at 2:54 pm	သီချင်းတွေအရမ်ကောင်းပါတယ်
Reply	ခွန်သန်းလေးချယ်ရီမြေ March 17, 2012 at 3:37 pm	ခွန်နိုင်ဦးငေါဝ်းသချင်မဉ်းအောဝ်းလဲ့ဒင်းပါမွိုင်သွ။
Reply	Admin-Khun March 20, 2012 at 2:54 pm	ခွန်နိုင်ဦး ငေါဝ်းသချင်နောဝ် နီသွမ်းသီး ဟွန်ဖိုတ၀်းသြ .. မဲ့ထွမ်ကျမ်,လဒျာ;သြ … မဉ်မော့မဲ့ ဒဲင်ဖေ;နောသွ, … ကေဇူတင်ငါအကျောင်, .
Reply	bwaykhuu April 28, 2012 at 4:26 pm	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်- ခုလိုသီချင်းကေင်းကောင်းလေး တင်ထားပေးတဲ့အတွက်။
”ဒဲဉ်သီးလာဗွေ င၀်းသချင် ”ကားကအ၀်း မဉ်းစုဖေးန၀် ယိဉ်းယမ်ယမ်သနယ်–
thanksalot to you,
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ သီချင်းကို စုစည်းပေးတဲ့ အတွက်— လိုတိုင်းရတတိုင်းပီးတဲ့ ဘ၀နဲ့ ပြည့်ပါစေဗျာ–
Reply	khunnay(နောင်ကား) June 14, 2012 at 7:49 am	ကျွန်တော် စီရီတစ်ခုလုံးကို လိုချင်တယ်။
ဗျာ။ သီးချင်းကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော် ကူးလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဗျာ ကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Reply	Admin-Khun June 14, 2012 at 2:46 pm	လိုချင်သလောက် Download ရယူဖို့ Link ချိတ်ထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေသလို Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် Khunnay (နောင်ကား) ။ ကူးလို့အဆင်မပြေတာက အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် ဘာအခက်ခဲများ ရှိလို့လဲဗျ? Connection ကြောင့်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ .. ။
Reply	ခွန်စစ်သွေး June 22, 2012 at 5:14 pm	ရဲသွေး၊တူးလေး၊ မိုးမိုးစံ သီချင်းများကိုလိုချင်ပါတယ်ဗျာ။ တစ်ယောက်စီဆိုထားတဲ့သီချင်းပေါ့ အဲဒါလေးကို တောင်းဆိုပါ ဗျာ
Reply	Admin-Khun June 24, 2012 at 3:04 am	တင်ထားပြီးသား ခွန်ရဲသွေး၊ ခွန်တူးလေး၊ နန်းမိုးမိုးစံ သီချင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ရှာဖွေ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Reply	khunthanlwin June 25, 2012 at 1:37 am	ခွန်ရဲသွေးနဲ့ခွန်ရဲနိုင်တို့တွဲပြီးသီဆိုထားတဲ့ Radio အခွေကိုတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
Reply	khun Wan Htoo August 14, 2012 at 5:03 pm	့ပအိုဝ်း အမျိုးသားသီချင်း တွေအလွယ်တကူ Down လို့ရအောင်တင်ပေးထားတား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ Umphiem Refugee Camp ထဲုင်းခမ်း
Reply	ခွန်ခမ်းကောင်.kaw.nwe August 15, 2012 at 7:47 am	သီချင်းတွေကိုအားလုံးကြိုက်ပါတယ်
Reply	kyawwin August 17, 2012 at 6:08 pm	လေးစားပါတယ်လူကြီးမင်း
Reply	KHUNTUNAYE (ခမ်းပင်လောင်) August 27, 2012 at 3:55 pm	ဟွုန်ဟ၀်မွေးဒျားသွ ပအိုဝ်သ စေတနာအ၀်ဗွေလွို
Reply	ခွန်လွမ်းနောင် October 23, 2012 at 8:07 pm	lot nai
Reply	ခွန်လွမ်းနောင် October 23, 2012 at 8:11 pm	8s7tgdhishjxckcyzsukagisuo,hcius
Reply	ခွန်ဝေးစိုင်း October 27, 2012 at 8:25 pm	ဟိုင်း….ဟွန်ဟ၀်သ.ရေ.ငါးမရေးမရားသွူသြ..သီချင်းတွေအရမ်းကောင်းနေပါတယ်အမျိုးသားသီချင်းကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ပေးတဲ့အတွက်အရမ်းပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်နောက်လဲများများတင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်……..ခွန်ဝေးစိုင်း…………
Reply	့Nankhinnwehtun December 29, 2012 at 11:53 am	သီချင်းတွေကိုအားလုံးကြိုက်ပါတယ်
Reply	rak pao pay January 9, 2013 at 7:39 pm	ကားကအ၀်း ကျိုက်.သ.လို့ ဒျား…ကေ.ဇူတင်းငါမရေးမရား…
Reply	ခွန်ကံထွန်း-ပချာကလို(ဆီဆိုင်) January 9, 2013 at 8:47 pm	ခွေသွဉ်းထာဝရဖေးအားငါးစနဲ.သြော
Reply	ုခွန်ချစ်မိုး January 15, 2013 at 3:34 pm	ကျေးဇူ့တင်းငါးသွပေးအမျာ့
Reply	khunlaraung (Forestry) January 29, 2013 at 11:36 am	မင်္ဂလာဒျားသြ။
Reply	khunlaraung (Forestry) January 29, 2013 at 11:38 am	pa oh song for dance.I get.
Reply	ခွန်စည်သူဖြိုး January 29, 2013 at 9:03 pm	ကျေးဇူး။ ပအိုဗျည်းစာအုပ်ဘယ်လိုဒေါင်လုပ်ဆွဲရမလဲ။
Reply	Admin-Khun January 31, 2013 at 10:13 pm	ပအိုဝ်းလိတ်မွူး စာအုပ်ယူချင်ရင် ဒီစာပေါ်မှာ နှိပ်လိုက်ပါ… ။
Reply	khunbahtoo/Taunggyi(ဖက်ကွံ;) March 15, 2013 at 10:40 pm	ခွန်လေဆာ နဲ့တကွ အဖွဲ့သူသားအားလုံးကိုကျေးဇှုးတင်ပါတယ်
Reply	Khun Lazer March 21, 2013 at 7:37 am	အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. Reply	khun young lyae April 7, 2013 at 9:27 pm	တင်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	ခွန်စောမောင်( ခမ်းကက္ကူး) April 8, 2013 at 2:41 am	ကေ.ဇူ.တင်းငါးသြ နားဗားင၀်သချင်.ယိုဖုံးကားကအ၀်န၀်.ကျိုက်ဒျားလို.လို.သြ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ခေါင်းစဉ်အလိုက်	Pa-Oh Dhamma (4)
Pa-Oh Ringtones (2)
သီချင်းအခွေပေါင်း	July 2013 (11)
၂၄ နာရီအတွင်း: 674
Online ရှိသူပေါင်း: 2
seattle seo Recent Posts	ကံ;ဟောဝ်ခွင်,
Recent CommentsChdkchdk on ထာ,ရက်အာ;khun nyan on ယွယွဒွိုန်းသဲင်phyephyoaumng on Radiophyephyoaumng on How to Download?phyephyoaumng on How to Download?	© 2015 Pa-Oh MP3 | Brought to you By: => ခွန်လေဇာ ( ဝေင်,ကျောက်လွုံတန် - ဒုံထီပုံ; )